Apple muna 2015: zvigadzirwa zvitsva, zvakafanana manzwiro ekare | IPhone nhau
IPad nhau | | iPad, Apple zvigadzirwa
2015 inopera uye 2016 inotanga, saka harisi zuva rakaipa kumira uye kutarisa kumashure. Rave riri gore iro Apple yakaburitsa chikamu chitsva chechigadzirwa icho chaisati yambogadzira kare. Asi isu hatigone kugara nechichi chigadzirwa chimwe chete nekuti chakavandudza zvimwe zvikamu nezvigadzirwa zvitsva zvinoratidza nzira inoenda kumberi kwemakore anotevera. Iyo Apple Tarisa, iyo iPad Pro, iyo Apple TV 4G, iyo MacBook ... Kubhejera maApple pane zvigadzirwa zvitsva kwakagutsa vazhinji, vakamisa vamwe pasi, asi havana kusiya munhu asina hanya. Apple yave ichipomerwa kuva ne "beta" gore nekuti haina kuburitsa chero chinhu chapera.
1 Zvitsva "zvisina kupera" zvigadzirwa
2 Iyoyo yekare bhaisikopo
Zvitsva "zvisina kupera" zvigadzirwa
Vamwe vakapomera Apple kuburitsa zvigadzirwa zvisati zvapera. Zviripachena kuti zvese zvinoenderana nekuti zvatariswa here, kana kuti, kana mumwe nemumwe achifunga kuti chigadzirwa chavo chapera. Iyo Apple Watch yakatanga nezvakawanda zvekuwanika nyaya. Kunyangwe isu tisingazive huwandu hwekutengesa kweiyo wachi, nekuti Apple inoshingirira kusavapa, zvinoita sekunge chikumbiro chaive chakakwirira zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa nekambani, saka vakatadza kukunda zvese zvikumbiro uye vakaita kusimudzira kwakamisikidza izvo. zvakatora nguva kuti zvipararire pasirese.
Zvisinei nematambudziko aya, nhamba yezvibatsiro zveApple Watch yakanga ichikura nekukurumidza, uye nguva pfupi yapfuura izvo zvaifanira kunge zvakaitirwa vazhinji vhezheni yekutanga yemaitiro ayo yakatangwa: watchOS 2. Apple yakatanga gadziriso yakapa mikana mitsva kune vanogadzira senge mashandisirwo emuno nekuwana ma sensors ewachi.
Iyo itsva Apple TV 4 inopomerwa chimwe chinhu chakafanana.Kugadzira kwakada kufanana neyaakatangira, asi pfungwa yakatosiyana yeterevhizheni nemashandisirwo seanonyanya protagonist. Chimwe chigadzirwa chisina kupera? Sekureva kwevamwe, zvinoita, nekuti haina iyo yekushambadzira terevhizheni sevhisi iyo Apple yaizotanga. Iro basa harina kana kumbobvira ratombofungidzirwa neApple chairo, asi rakatopomedzerwa kutadza kwekusaiwana nenguva. Apple nyowani multimedia chishandiso yatove neanopfuura mazana maviri nemazana matanhatu ekushandira anoenderana, mamwe acho anoshamisa kwazvo, uye haasvike mwedzi miviri kubva payakatangwa.
Iyo MacBook nyowani yaive zvakare sosi yekushoropodzwa kukuru kukambani, kunyanya nekuda kwesarudzo yayo yekubvisa zvese zvinongedzo uye kusiya imwe chete. Iyo USB-C iyo iwe yaunogona kushandisa kune zvese kubva kuchaja iyo kuti ubatanidze hard drive kana yekunze kuratidzwa. Kuzvimiririra iyo inokupa iwe yakawanda yekushandisa zuva usinga riisire iro, rakanakisa Retina kuratidza uye inopfuura simba rakaringana rekuita mabasa iro rakagadzirirwa zvirinyore (ndinopokana kuti chero munhu anoda kushandisa Final Cut Pro atenge izvi komputa) pa920 chete magiramu ehuremu anga asingakwanise kugutsa avo, vasina kana kumbozviedza, vakashoropodza simba rayo rakaderera nekuda kweiyo Intel Core M processor.
Yekupedzisira kubheja kukuru kwegore kwave kuri iyo itsva Pro Pro.Pfungwa nyowani kubva kuApple, zvinoenderana nevazhinji zvakare inoenderera neshanduro dzekare, inoedza kupa iyo iPad nemidziyo inodiwa kuitira kuti vashandisi vatange kufunga nezve mukana wekuchinja. yavo inotakurika nepiritsi idzva iri. Hukuru hwayo uye simba rakakura reprosesa yayo, pamwe nemhando yechidzitiro chayo uye Apple Penzura nyowani inochipedzisa, inosiya ivhu rakagadzirwa chaizvo kuti riite izvi, asi ichine kukamurwa kukuru kwekuve neIOS sekushanda. system. Hongu, ichokwadi kuti mashandisiro akavandudza zvakanyanya, kuti kune atove akanakisa ekushandisa ekushandisa eIOS, asi ichiri kashoma katarogu uye zvakare mashandiro ayo haasvike kune ayo akafanana desktop. Kunze kweiyo graphic dhizaini uye mumhanzi indasitiri, iyo iPad Pro haisati ichionekwa sechigadzirwa chinogona kunyatso simira kune yakanaka laptop.
Iyoyo yekare bhaisikopo
Pane chero munhu anorangarira iyo yekutanga iPhone? Iyo smartphone yakachinja pfungwa yemafoni emafoni uye ikozvino ndiyo yezvimwe zvinobudirira zvigadzirwa zvenguva dzese. Chizvarwa chayo chekutanga, chakatangwa muna 2007, chakashaiwa 3G yekubatana, hachikwanise kutumira MMS uyezve haina kana App Store kukwanisa kuisa maapplication. Yakanga isina kana sarudzo yeku'kopa uye kunama ', tisingataure kusave nemutambo mumwechete mukabhuku kake kezvakagara zvaiswa maapplication. Vashoma manje vano rangarira kukanganisa kwekutanga Apple smartphone.
Uye hazvisi zvitsva kuti Apple iri kupomedzerwa kuyedza kuvhara zvigadzirwa zvakawandisa, sezvo vamwe vava kuomerera pakuita kuti titende. Ngatirege kukanganwa kuti Apple yakambove iine huwandu hwemaprinta emakomputa avo, tisingatauri mutambo wake wemutambo, Apple Pippin, yakaburitswa muna 1995 ne $ 599. Kuvhurwa kweyekutanga iPod kwakatobvunzwa. Pane chero munhu anopokana kuti iPod yanga iri imwe yezvigadzirwa zvemakambani kwemakore? Huye, chizvarwa chekutanga chakashoropodzwa zvakanyanya uye paive nevanhu vazhinji vaikumbira Apple kuti itarise pane zvayakagara ichiita uye kusiya "matoyi" ekushandisa kwakawanda.
Hongu, zvinogona kunge zviri zvechokwadi kuti zvizvarwa zvekutanga zveApple zvigadzirwa zvine zvazvinokanganisa, ndinofunga icho chinhu chatinofanira kubvuma tese, kunyangwe tiri vateveri vekambani. Ichokwadi zvakare kuti nguva zhinji zvinotarisirwa izvo isu pachedu tinogadzira nemakuhwa zvoita kuti chigadzirwa chekupedzisira chisakwanise tarisiro huru yakagadzirwa. Asi pane zvakare chimwe chinhu chakajeka: sezvazvinowanzoita chirevo chinokatyamadza che "Izvi neMabasa hazvina kuitika" inhema dzenhema. Apple yagara ichiita zvakafanana, uye panguva yacho haugone kutaura kuti yaita zvakaipa kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Apple muna 2015: zvigadzirwa zvitsva, zvakafanana zvekare manzwiro
Maitiro ekudzivirira maMail eIOS kubva pakumaka mazuva ebhuruu